Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » 60% dadka Maraykanku uma badna inay safraan fasaxyada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
.60% dadka Maraykanku uma badna inay safraan fasaxyada.
Sahankan ayaa lagu ogaaday in 29% dadka Maraykanku ay u badan tahay inay u safraan Thanksgiving-ka halka 33% ay u badan tahay inay u safraan ciida kirismaska— korodhka 21% iyo 24%, siday u kala horreeyaan, marka la barbar dhigo 2020. Kuwa qorsheeya inay u safraan ciidaha waxay filayaan wad, laakiin kor u kaca qiimaha gaaska ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto qorshayaashaas.
Saddexdii qof ee Maraykan ah mid ka mid ah ayaa qorsheynaya inay u safraan Christmas-ka, iyo xitaa in ka yar qorshe ay ugu safraan Thanksgiving.
68% dadka safarka ah ee Thanksgiving-ka ah waxay qorsheeyaan inay la joogaan qoyska ama saaxiibada, halka 22% ay qorsheynayaan inay degaan hoteel.
66% dadka safarka ah ee Christmas-ka ayaa qorsheynaya inay la joogaan qoyska ama saaxiibada, halka 23% ay qorsheynayaan inay degaan hoteel.
Iyadoo sare u kaca heerarka tallaalka ee ka dhanka ah COVID-19 ay kordhisay heerarka raaxada safarka, badi dadka Mareykanka ah ayaa wali dooranaya inay sii joogaan guriga xilligan fasaxa, sida lagu sheegay sahan cusub oo heer qaran ah oo ay soo saartay Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA).
Sahankan ayaa lagu ogaaday in 29% dadka Maraykanka ah ay u badan tahay safarka Thanksgiving-ka iyo 33% waxay u badan tahay inay u safraan Christmas-ka korodhka 21% iyo 24%, siday u kala horreeyaan, marka la barbar dhigo sanadka 2020. Kuwa qorsheynaya inay u safraan fasaxyada waxay filayaan inay baabuur wadaan, laakiin kor u kaca qiimaha gaaska ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto qorshayaashaas.
Sahan lagu sameeyay 2,200 oo qaangaar ah ayaa la sameeyay Oktoobar 30 - Noofambar 1, 2021, oo ay samaysay La-taliyaha Subax AHLA. Natiijooyinka muhiimka ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Saddexdii qof ee Maraykan ah mid ka mid ah ayaa qorsheynaya inay u safraan Christmas-ka (33% waxay u badan tahay inay safraan, 59% lagama yaabo), iyo xitaa qorshe yar oo loogu safro Thanksgiving (29% waxay u badan tahay, 61% lagama yaabo).
52% dadka Mareykanka ah ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay safaro yar qaataan halka 53% ay qorsheynayaan inay safaro gaagaaban qaataan qiimaha gaaska oo sare u kacay.
Socdaalayaasha wakhtiga firaaqada ah waxay samaynayaan dhowr hagaajin qorshahooda safarka iyadoo lagu salaynayo xaalada faafa ee hadda jirta, oo ay ku jirto kaliya ku safrida masaafo wadista (58%), socdaalo ka yar (48%), iyo qaadashada safaro gaagaaban (46%).
Waalidiinta carruurta da'doodu ka yar tahay 12 jir, 41% waxay yiraahdeen helitaanka tallaallada carruurta da'doodu tahay 5-11 waxay ka dhigaysaa inay u badan tahay inay safraan.
68% ee socotada Thanksgiving iyo 64% ee socotada Christmas-ka ayaa qorsheynaya in ay kaxeeyaan, marka la barbardhigo 11% iyo 14%, siday u kala horreeyaan, kuwaas oo qorsheynaya inay duulaan.
In kasta oo tallaalladu ka caawiyeen dadka safarka ah inay dareemaan raaxo badan, kor u kaca qiimaha gaaska iyo welwelka joogtada ah ee ku saabsan masiibada ayaa ka dhigaysa dad badan oo Mareykan ah inay ka labalabeeyaan inay safraan inta lagu jiro fasaxyada. In kasta oo waxoogaa yar oo kor u kac ah laga filayo safarka fasaxa sanadkan, hudheeladu waxay sii wadi doonaan inay la kulmaan hoos u dhac dhaqaale oo ka yimaada masiibada, taas oo hoosta ka xariiqaysa baahida loo qabo gargaarka federaalka ee la beegsanayo, sida Save Hotel Jobs Act, si loo taageero warshadaha iyo shaqaalaheeda ilaa safarku si buuxda u soo noqdo.
In kasta oo ay ka mid yihiin kuwa ugu dhibka badan, hudheeladu waa qaybta kaliya ee martigelinta iyo warshadaha madadaalada ee aan weli ka helin gargaarka tooska ah ee Congress-ka.